Gudaha geetooyinka, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Oo waxaa lagu odhan doonaa, Dalkanu halkaasay deggan yihiin, waxay noqdeen sidii beertii Ceeden oo kale, oo magaalooyinkii laga tegey oo baabba'ayna waa la dejiyey oo la degay. (Yexesqeel 36:35).
Waqtiga qirashada - Waxaan ka mid ahay jiilkii ugu horeeyey ee bartay inuu ka mahadnaqo kartida Elvis Presley. Maanta, sidii gadaashiisa, anigu ma jecli dhammaan heesayadiisa oo dhan, laakiin waxaa jira mid saamayn gaar ah igu yeeshay oo si togan aniga iila yimid tobannaan sano. Waa run maanta sidii ay ahayd markii la qoray. Waxaa qoray Mac Davis sannadihii-meeyadii kadibna waxaa duubay fanaaniin badan. Waxaa loogu magac daray "gudaha Ghetto" wuxuuna sheegayaa sheekada cunug ku dhashay geetooyinka Mareykanka, laakiin wuxuu ku dhici karaa qeyb kale oo adduunka ah. Waxay ku saabsan tahay halganka loogu jiro badbaadinta ilmaha la dayacay ee jawi colaadeed. Cunugga waxaa loo dilaa sidii nin dhalinyaro ah, rabshad leh isla mar ahaantaana cunug kale ayaa ku dhashay - gudaha geetooyinka. Davis ayaa ugu horreyntii ugu yeeray heesta "Cirro Circle", oo ah cinwaan run ahaantii sifiican u habboon. Nolosha nololeed ee dad badan oo ku dhashay saboolnimo iyo dayac ayaa inta badan ku dhammaaday rabshado.
Waxaan u abuurnay adduunyo dhibaato aad u daran. Ciise wuxuu u yimid inuu joojiyo geetooyinka iyo murugada dadka. Yooxanaa 10:10 wuxuu leeyahay, Tuuggu wuxuu u yimaadaa inuu wax xado oo dilo oo halleeyo mooyaane. Waxaan u imid si ay nolol u helaan oo ay u helaan barwaaqo. "Tuugyadu way naga xadaan - waxay qaataan tayada nolosha, waxay ka qaadaan dadka hantida, oo ay kujirto is-ixtiraamka. Shaydaanka waxaa loo yaqaanaa baabi'iyaha wuxuuna mas'uul ka yahay geetooyinka dunidan. YEREMYAAH 4: 7 Libaax baa ka soo baxay jiqdiisa, quruumo baabbi'iyihiina wuu soo kacay. Wuxuu ka dhaqaaqay meeshiisii ​​si dalkaaga looga dhigo cidla, magaalooyinkiinnii waa la laayay, waana degganaan. ”Aasaaskii Shaydaanka burburiyey waa dembiyadii muuqaalkooda oo dhan.
Ujeeddada oo dhan, si kastaba ha noqotee, waa inuu ku sameeyay oggolaanshahayaga. Bilowgii waxaan doorannay jidkeenna sida ay ku leedahay Bilowgii 1:6: “Ilaahna wuxuu arkay dhulka, oo bal eeg, wuu kharribmay; maxaa yeelay binu-aadmiga oo dhami waxay ku kharribeen jidkii ay ku lahaayeen dhulka. Rooma 12:3 waxay noo sheegaysaa: "maxaa yeelay dhammaan way wada dembaabeen oo gaadhi waayeen ammaanta Ilaah" Waxaan ka fogaannay kii na tusi doona jid aad uga wanaagsan (1 Korintos 12:31).
Waxaa iman doona maalin aan cirfiir dambe jiri doonin. Dhimashada rabshadaha leh ee dadka dhalinyarada ahi way dhammaataa oohintii hooyooyinka way joogsan doontaa. Ciise Masiix wuxuu u imaan doonaa inuu dadka naftiisa badbaadiyo. Muujintii 21: 4 na dhiirrigelinaysaa oo waxay leedahay, Isaga oo indhaheeda ka tirtira oo indhaheeda ka tirtira, dhimashaduna mar dambe ma jiri doonto, oo mar dambena ma jiri doono murug, oohin, iyo xanuun; waayo, kuwii hore way dhammaadeen. ”Ciise wax kasta wuu cusboonayn doonaa, sidaan ka akhrinay Muujintii 21: 5, oo kii carshiga ku fadhiyey wuxuu yidhi, Bal eeg, wax kastaba cusayb baan ka dhigayaa. Hadana wuxuu yiri: Qor! Maxaa yeelay ereyadan waa qaar run ah oo run ah. Maalintay dhaqso u iman lahayd!
Allaha naxariista leh ee cajiibka ah, waad ku mahadsan tahay qorshahaaga badbaadada ee inaan nafteenna ka badbaadnay. Ii caawi Sayidow inaan u naxariisanno kuwa baahan. Boqortooyadaadu ha timaado. Aamiin.